उहाँले गरिबी, unappreciated र आफ्ना समकालीनहरूको द्वारा अपरिचित मा मृत्यु भयो। भ्यान Gogh र Cezanne संग, पोस्ट-प्रभाववाद चित्रकला को युग महिमा गर्ने कलाकार, - पीओएल Gogen चित्रहरु जो आज सार्वजनिक लिलामी मा बेचिएको सबैभन्दा महंगा चित्रहरु सूचीमा समावेश छन् र लिलामी बन्द। यो अक्सर "को घृणास्पद Gauguin" भनिन्छ, र उहाँले बाल्यकाल देखि आफूलाई अभागी छलफल र परमेश्वरको accuses "अन्याय र क्रूरता को।" , धेरै परीक्षण, असफलता र रोगहरु आफ्नो सारा पार्थिव बाटो सँगसँगै गाह्रो रचनात्मक हुन बनाउने र प्रसिद्धि र पहिचान को एक स्वाद अनुमति छैन: साँच्चै, एउटा ठूलो कलाकार को जीवनी पढ्दा, तपाईंले दुष्ट भाग्य उहाँलाई सबै आफ्नो जीवन भन्दा झुन्डिएको कि लाग्छ थियो।
"रंगीन बाल्यकाल" र भविष्यमा कलाकार को युवा
एक कलाकार यसको गठन कसरी सुरु गर्न के Gogen पीओएल आए कसरी र गर्नुभयो? आफ्नो जीवनी धेरै रोचक छ र स्थिर सार्ने संग जोडिएको छ। स्थानहरू परिवर्तन र एक मूल unspoilt किनाराको बस्ने को सपना - रंग गर्न insatiable इच्छा साथ अर्को ठूलो आवेग। र त्यहाँ उहाँले पेरु मा आफ्नो आमा को मातृभूमि बस्थे र हरेक दिन राष्ट्रिय वेशभूषा, धनी प्राकृतिक वनस्पति र उष्ण कटिबन्धीय मा एक स्वतन्त्रित अस्तित्व आनंद को उज्ज्वल रंग देखे, आफ्नो बाल्यकाल मा विदेशी लागि यो प्रेम थियो।
जब सानो पावलले बल्लतल्ल एक वर्ष पुरानो, आफ्नो बुबा - एक पत्रकार Klovis Gogen, एक रिपब्लिकन - एउटा असफल तख्तापलट antimonarhistskogo जहाँ पत्नी जन्म भएको थियो पेरु, फ्रान्स बाट सार्न निर्णय पछि। तर, सडक हृदय आक्रमण को मृत्यु भएको छ। पावलले सात वर्ष बस्ने र तिनका मामा को सम्पत्ति मा लीमा मा भयो। कि पछि, त्यो र उनको आमा केटा चाँडै फ्रान्सेली सिकें र उच्च विद्यालय सफलतापूर्वक स्नातक जहाँ पेरिस, सारियो। तर, अध्ययन यसलाई अपील थिएन, र सबै विचार समुद्र द्वारा यात्रा थियो। अन्तमा, 17 वर्ष, एक विद्यार्थी पाइलट रूपमा स्कूलमा परीक्षण, जहाजमा यात्रा गर्नु पुगएर Gauguin असफल भयो। लगभग छ वर्ष, यो समुद्र मा लगातार यात्रा छ, उहाँले दक्षिण अमेरिका र युरोप, भूमध्य र उत्तर समुद्र मा पौडनु toured।
दलाल वा कलाकार?
1872 मा, आफ्नो आमा को मृत्यु को सिक्दै मा, पीओएल Gogen परिवार मित्र गुस्ताव Arosa को समर्थन संग, एक रूपमा सेवा प्रवेश पेरिस फर्के र, stockbroker। निस्सन्देह, यो सधैं पावलको सपना देख्यो के छैन। छोराछोरीलाई छ, त्यो एक Dane विवाह: तथापि, केही समय उहाँले एक "सामान्य जीवन" नेतृत्व गर्न प्रबन्धन। परिवार म थप सहज मा एक घर छ, खुसीको कुरा बसोबास। घरमा यो विशेष ठाउँमा आफ्नो कार्यशाला लाग्छ। Gauguin, पहिले मात्र चित्रहरु सङ्कलन, उहाँले नै लेख्न सुरु हुन्छ। आफ्नो पहिलो परिदृश्य को 1873-1874 वर्ष पहिले नै थिए। एकै समयमा, त्यो कला प्रदर्शनीहरू मा 1879 भाग देखि Impressionists भेटे र। अब उनको एक कलाकार गम्भीरतासाथ लिन। आफ्नो रचनात्मक गतिविधि मा एक विशेष भूमिका खेलेका एडगर Degas, पीओएल Gogen धेरै बाध्य थियो। को चित्रहरू, जो उहाँले पेंट्स, उहाँले एक Degas किन्छ र व्यापारी इंप्रेशनिस्ट चित्रहरु गर्न यो प्रोत्साहन दिन्छ। बिस्तारै काम दलाल चित्रकला गर्न Gauguin दमन गर्न थाल्छ, धेरै सानो समय छ। तसर्थ, 1885 मा पावलले आफ्ना काम अन्त्य गर्न निर्णय, डेनमार्क मा आफ्नो परिवार छोडेर पेरिस गए। उहाँले लेख्छन् र Symbolist को कलाकार संग वार्ता जहाँ ब्रिटानी, बिताएको समयको लागि। यो यस्तो भन्छन् प्रसिद्ध चित्रहरु "दर्शन उपदेश पछि" र "Swineherd। ब्रिटनी" (छैन सभ्यता द्वारा SPOILED मान्छे को जीवन, चित्रण गरिएको) को रूपमा।
सभ्यता देखि उम्कन र Gauguin को कार्यहरूमा पनप
फ्रान्स जीवन लेखन आफूलाई समर्पित गर्न चाहन्छ जो Gauguin, गर्न किफायती छैन। मई 1889 मा, पूर्वी संस्कृति को प्रदर्शनी मार र उज्ज्वल र रंगीन पेंट्स प्रदर्शन काम प्रेरित पावलले टाहिटी जाने निर्णय। यसलाई आफ्नो प्रतिभा र प्रेरणा उच्चतम बोध पुग्यो कि यहाँ थियो। एक द्वीप स्वर्ग भन्दा प्रसिद्ध र सफल चित्रहरु द्वारा बनाइयो। बल्ल कसरी कलाकार पीओएल Gogen प्रकट गर्छ। चित्रकला, उज्ज्वल र न्यानो रंग द्वारा विशेषता उष्ण कटिबन्धीय, मा। पावलले हरियो र सुनको-pinkish बालुवा ( "साधारण फल संग टाहिटियन महिला") बाट महिला शरीर tanned चित्रण ( "तपाईं विकिपीडियामा नयाँ हुनुहुन्छ?")। 1892 को समयमा उहाँले धेरै 80 को रूपमा चित्रहरु लेखे! तिनीहरूले मात्र विपरीत रंग र स्थिर रचनाहरूको, तर पनि उज्ज्वल सजावटी भिन्न। "टाहिटियन pastorale" - - यो कुटिया मा प्रदर्शन आज उदाहरण नै वर्ष पीओएल Gogen लेखिएको थियो चित्रकला समावेश।
पावलले Gauguin जीवनमा नयाँ झटका
पेरिस एउटा छोटो यात्रा पछि कलाकार एक विजयोल्लास विफलता (प्रदर्शनी कठोर आलोचना) सट्टा अपेक्षित पहिचान राखेका थियो जहाँ, (कारण रोग र पैसा को कमी गर्न), उहाँले ओशिनिया गर्न अन्तमा फर्के। यहाँ उहाँले मात्र होइन एक कलाकार तर पनि एक लेखक, पत्रकार, मूर्ति रूपमा, काम जारी छ। तर, आफ्नो काम छैन त्यसैले अघिल्लो वर्ष जस्तै हँसिलो छ। को चित्रहरु Gauguin को हृदय मा बसे पनि फिक्री र निराशाले, प्रतिबिम्बित: "। Nevermore" "मातृत्व", 1897 मा उनले आफ्नो सबै भन्दा प्रसिद्ध काम, एक यस्तो लेखे "हामी बाट आयो कहाँ? हामी को हुन् हामी कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ?"। स्नातक पछि, उहाँले एउटा असफल आत्महत्या प्रयास, रोग र सामान्य भ्रम को थकित (पनि "पार्थिव प्रमोदवनमा" मा, त्यो व्यवहारकुशल नभएको र अयोग्य मानिन्थ्यो) गरे।
इच्छित मृत्यु सट्टा "Godsend"
उहाँले मृत्यु लागि परमेश्वरलाई यसरी प्रार्थना गरे, तर जीवित रह्यो। (चित्रहरु केही बेच्न असफल हुनत पेरिस, 1,000 Francs पठाइएको देखि) Retreated रोग, अचानक पैसा थियो, र कलाकार को चित्रहरु सफलतापूर्वक बेच्न सक्षम थियो तब व्यक्ति। आफ्नो नाम उहाँले के आफ्ना सबै जीवन पीओएल Gogen को सपना देख्यो प्रस्ताव, Ambruaz Vollar थियो। उहाँले, Vollard प्राप्त गर्न सक्छ प्रति वर्ष 25 लेखे जो चित्रहरू, (प्रत्याभूति), यसरी, बारी मा, कलाकार मासिक तलब (300 Francs) तिर्न बाध्य छ।
यो भाग्य पावलले मुस्कुराया कि, लामो समय को लागि तर देखिन्थ्यो। रोग फेरि गति पाउन थाले, र त्यहाँ अधिकारीहरूले समस्या थिए (को स्थानीय Gauguin तान्नुभयो - अब मात्र होइन एक कलाकार तर पनि एक पत्रकार - राजनीतिमा)। पावलले दुखाइ Numb गर्न, morphine, opium tincture लिन थाले। चाँडै, उहाँले मृत फेला परेन (यो एक प्राकृतिक मृत्यु वा जानिजानि विषाक्तता थियो, यो ज्ञात छैन)।
POL Gogen र कला आफ्नो योगदान
रचनात्मकता - एउटा अटुट सङ्घर्ष (रोग, परिस्थिति, मान्छे) मा कडा जीवनको बावजुद पीओएल Gogen अझै पनि आफ्नो कल के देखे संग संलग्न। आफ्नो चित्रहरु आधुनिक कला एक भारी योगदान गरेका छन्। "नारी एक फल समाउँदै", "द पहेंलो ख्रीष्ट", "संग फूल नारी", तैपनि सुगा संग जीवन "लिँदै फल" "", "मजा दुष्ट आत्मा", "यसको: यहाँ विश्व पीओएल Gogen दिनुभयो जो सबै भन्दा प्रसिद्ध चित्रहरू, केही हो Vayramuati अन्य भनिन्छ। "
कसरी पेन्सिल र केदारनाथ एक व्यायाम गर्ने व्यक्ति आकर्षित गर्न
कसरी चरणमा पिल्ला मा एक पेन्सिल आकर्षित गर्न सिक्न
मध्ययुगीन युरोप को gothic वास्तुकला
कलाकार द्वारा प्रसिद्ध चित्रहरु प्रजनन: कसरी र कहाँ तिनीहरूले छन्, प्रजनन लागि मांग को एक सिंहावलोकन
पछाडीबाट वसा हटाउने: व्यायाम। दिनको क्यालोरीको वजन कम हुन्छ
एक यदि "VKontakte" बनाउन कसरी बारेमा थप जानकारीको लागि
चाँडै कसरी गर्भवती प्राप्त गर्न यदि तपाईं सक्दैन
प्राचीन मानिसहरू र समकालीनहरूको भूमिगत शहर
वजन घटानेका लागि सङ्कलन। वजन घटानेका लागि सिंक: समीक्षा
घर मा कपडा कसरी रंग गर्न?
एक शुभ रात्री गरेको सो को अपरिहार्य विशेषता